အေးချမ်းမှုတွေပေါင်းစုံနေတဲ့ ကျွန်မသိပ်ချစ်ရတဲ့မြို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » အေးချမ်းမှုတွေပေါင်းစုံနေတဲ့ ကျွန်မသိပ်ချစ်ရတဲ့မြို ့
အေးချမ်းမှုတွေပေါင်းစုံနေတဲ့ ကျွန်မသိပ်ချစ်ရတဲ့မြို ့
Posted by Mon Lay on Dec 19, 2017 in Travel |4comments
💛💙💜💚🧡ဘယ်လောက်တောင်အဲ့မြို ့လေးကိုချစ်သွားသလဲဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မယုံနိုင်ဘူး။ အရင်တုန်းကဆိုအင်းလေးသွားမယ်ဆို ပိုပြီးလည်ချင်တာပင်းတယနဲ့တောင်ကြီးလောက်ပဲ ဒါပဲ။ ကလောဆိုဘာမှလည်စရာမှမရှိတာ..ပျင်းတယ်မသွားချင်ပါဘူးtrekking ကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူး ဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်။ ဟိုတလောက ကလောကိုသွားလည်ပြီးတော့မှပဲ..ငါမှားလေစွ မှားလေစွလို့ နောင်တရမိတဲ့အထိကို ဒီမြို ့လေးကိုချစ်သွားခဲ့ရတာ။ မွန်လေးနိုင်ငံ (၄)နိုင်ငံရှိပါပြီ။မြို ့ပေါင်းလည်း ၁ဝကျော်ပြီ ရောက်ဖူးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့
ပါ။ ပြောရရင်အဆပေါင်းများစွာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားတွေထက် ဒီကလောမြို ့လေးကိုပဲမေတ္တာသက်ဝင်မိပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်ချစ်မိသွားသလဲဆိုရင် ငါတစ်နေ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဒီမြို့လေးမှာပဲအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဝယ်ပြီးပဲနေတော့မယ်လို့တောင်ဆုံးဖြတ်
လိုက်ရတဲ့အထိကို ချစ်မိသွားတာပါပဲ။ ရောင် စုံစိုက် ခင်း တွေ နဲ့ တောင် တန်း တွေ ကို background ထားပီး ဓာတ် ပုံ ရိုက် ရင် အရမ်း မိုက်ပါတယ်! View ကောင်း တဲ့ နေ ရာ တွေ ရှိလို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက် ချင်တဲ့ သူတွေ အတွ က် အရမ်း ကောင်းတဲ့မြို ့လေးပါ။ 💛💙💜💚🧡
ဘယ်လိုုသွားကြမလဲ? 🚊 🚊
ရန်ကုန်ကနေ ကလောကိုု Express ကားအတော်များများရောက်ပါတယ်။ တောင်ကြီးသွားတဲ့ကားစီးပြီး ကလောမှာ ဆင်းနေခဲ့ရုုံပါပဲ။ JJ -19800(VIP)
ရွှေမင်္ဂလာ -12500ရိုးရိုး ! 21000 အထူး
မန္တလာမင်း – ရိုး ရိုး 12500 ! အထူး 20500
လုမ္မိနီ- ရိုးရိုး 11000 ! အထူး 18000
မနက်စောစော၄နာရီရောက်တတ်တာမိုု့ တည်းမယ့်ဟိုုတယ်ကိုု ကြိုတင် ဘိုုကင်တင် ထားသင့်တယ်။ ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မျိုးဆို ကားစပယ်ယာကိုကြိုပြောထားရင် ဟိုတယ်ရှေ မှာချပေးပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေဆိုရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီရှိပါတယ်။ ရထားနဲ့လည်းသွားလို့.ရတယ်နော်..အတွေ့အကြုံသစ်ရတာပေါ့။
အကောင်းဆုုံးကတော့ ပန်းနှမ်းခင်းတွေ ပွင့်တဲ့၊ နေကြာပန်းတွေပွင့်တဲ့ နိုုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ပတ်ချာလည်ကတော့ အကောင်း ဆုုံးပါဘဲ။ ကလောမြို့လေးက အမြဲတမ်း အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတာမိုု့ သွားလိုု့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။ရန်ကုန် နွေရာသီ အပူရှောင်ချင်ရင် ဒီကိုုသွားလည်တာ အကောင်းဆုုံးပါဘဲ။
တည်းခိုဖို့ 🏨 🏨 🏨
ကလော မှာ တည်းခို ဖို့ hotel ကတော့ပေါပါတယ်။မွန်လေးတို့ကတော့ သွားရလွယ်ကူ၊ ကားပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ တန်းရောက်တဲ့ New Shine ဟိုတယ်မှာပဲတည်းခဲ့ပါတယ်။ view ကောင်းကောင်း ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တောင် စောင်းလေး တွေ ပေါ် မှာ ဆောက် ထားတဲ့ဘန်ဂလိုတွေရှိ
ပါတယ်။ ကော် ဖီ လေး တစ်ခွက် စာအုပ် လေး တစ်အုပ် ရှိရယ် ဆိုရင်ဖြင့်……
ဓနုလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရွာငံမြို့ကိုရောက်ရင် သွားလည်စရာနောက်တစ်နေရာကတော့ မိန်းမရဲသခင်မတောင် လို့ ခေါ်တဲ့ နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ နာမည်က ထူးခြားသလို တောင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေဟာ တကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမော၊ လှပ စိမ်းစိုပြီး တောင်တော်တစ်ခုလုံးဟာလည်း စေတီပုထိုး၊ ဖြူဖြူ သေးသေးလေးတွေနဲ့ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းပြီး မျက်စိပသာဒဖြစ်ရကာ စိတ်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ 🌸 🌸 🌸
မိန်းမရဲသခင်မတောင်ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင် မန္တလေးဟန်မြင့်မိုရ်လမ်းခွဲကနေ ရွာငံမြို့ကို တောင်အတက်လမ်းအတိုင်း လာခဲ့ရာမှာ ရွာငံမြို့ကို ရောက်လို့ တောင်ကြီး – ရွာငံ လမ်းမကြီးအတိုင်း နောက်ထပ် မိုင် ၂ဝနီးပါးခန့် ဆက်သွားခဲ့ရင် မြင်းကျဒိုး ဆိုတဲ့ ရွာကလေး
ကို ရောက်ပါမယ်။ 🌴 🌴 🌴
🎋 🎋 🎋အဲဒီရွာကလေးကို ကျော်လိုက်ရင် မိန်းမရဲသခင်မတောင် ဆိုင်းဘုတ်ခပ်ကြီးကြီးကို ညာဘက်မှာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဆိုင်းဘုတ်ကနေ ဝင်လာခဲ့ရင် မိန်းမရဲ သခင်မတောင်ကို လှမ်းမြင်နေရပါပြီ။
📚 📚 📚သူ့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးကလည်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာလေးပါ။ 😿 😿 😿ကဲ ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်
🌷 🌷 🌷နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး 👸 👸 👸ဘုရင့်သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့။အချစ်ဆိုတာကလည်း ဆန်းကျယ်တယ်လေ 💜 💜 💜 သူချစ်မိသူက ကျေးတောသားလေး 👉ကုမ္မာရ တဲ့ ။သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကိုဘုရင့် ရွေနားတော်ပေါက်ကြားတော့ ဘုရင်မင်းကြီး အရှက်တော်ထား အမျက်တော် ပွားစေခဲ့တာပေါ့။ 🍀 🍀 🍀
😿 😿 😿အမဲရိုးက ဟင်းအိုးကိုမှအားမနာ ငါ့သမီးတော်ကို ချစ်ဝံ့တဲ့ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ လူငနွားကို သတ်စေဆိုတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန် ့တော်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ထိုအမိန့်တော် သတင်းကို ကြားသိရသူ နန်းဧကရီမွှေးခမျာမှာတာ့ ရင်ဝကို ဆယ်ပေါင်တူ နဲ့ အထုခံရသလို ခံစားခဲ့ရမယ် ထင်မိပါရဲ ့။ချစ်သူမောင် ကုမ္မာရကို စိတ်ပူ နန်းတော်ကနေခိုးထွက်ပြီး အချစ်အတွက် ခရီးဆက် ခြေလှမ်းသွက်တွေသွက်ခဲ့ ကြတယ်ဆိုကြပါတော့. …… 💛 💛 💛
👫 👫 👫မင်းသမီးလေးက ကုမ္မာရကျေးတောသားကို လက်ဆွဲ ဖခင်ဘုရင်ကြီးနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်ပြေးကြရှာတယ်လေ ။ 🌴 🌴 🌴
🍁 🍁 🍁အဲဒီလို ထွက်ပြေးလာကြရင်း အခု မိန်းမရဲတောင်လို့ခေါ်တဲ့ တောင်ရဲ့ အရှေဘက် ရွာဖြတ်သန်းခ အခွန်တွေကိုကောက်တဲ့ ကင်းတောင်ဆိုတဲ့ နေရာကိုအဖြတ်မှာတော့ ဒီနေရာကနေ ဖြတ်သန်းဖို့ အဖိုးခငွေတွေကိုရွာစားတွေက တောင်းလာပါတယ်။ တောင်းလာတဲ့
ငွေကို ပေးဖို့ကတော့ လက်ထဲမှာ နတ္ထိ ဖြစ်နေပါတယ်။ချစ်ရသူ ကုမ္မာရကျေးတော့သားလေးကတော့ သွေးပျက်နေပြီထင်ပါရဲ့💜 💜 💜
👫 👫 👫မင်းသမီးလေး ခမျာမှာတော့ အချစ်ဆိုတာကို ယုံစားလို့ နန်းတော်ကနေ ပြေးထွက်ခဲ့ပြီး၊ဘုရင့်တပ်တော်သားတွေရဲ့ဝေးရာကို
ပြေးခွာထွက်ခဲ့ပေမဲ့ သူမ ချစ်ရသူ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ ကတော့ ဘုရင့်သမီးတော်ရဲ့ မျက်နှာကိုမှမထောက် ကင်းခွန်တော် မဆောင်နိုင်လို ့
ကျရောက်လာမဲ့ ရာဇဝတ်ဘေးတွေးကြောက်ပြီး မင်းသမီးကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ကာ၊သူ့ရွာလေးကို ပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့လေ 🚶 🚶 🚶
👸 👸 👸ဘုရင့်သမီးတော် နန်းဧကရီမွှေးအတွက် မှာတော့ချစ်ရသူမှတပါး အားကိုးစရာမရှိ စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ ဖခင်ဘုရင့်ကြီး
အမျက်တော် ထိရှမှာကို စိုးကြောက်ပြီး မြင့်မားတဲ့ တောင်ကိုကုတ်ကတ်တက် တောင်ရဲ့အနောက်ဘက် ပေ၆ဝခန် ့နက်တဲ့ ရေဝဲကြီးထဲ အချစ်ကိုစိတ်နာပြီး စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချ မျက်စိ့ကိုမှိတ်လို့ ခုန်ချ အဆုံးစီရင်ခဲ့ ရှာတယ်လေ။ 🙅 🙅 🙅
🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️“အချစ်ကို ဦးစားပေး ငါကမောင်တော်ကို ရွေးခဲ့တာတောင် ငါ့အချစ်ကို မထောက် ကင်းခွန်ကြောက်လို့သစ္စာဖောက်ရက်တယ်တဲ့ …”အချစ်ကို စိတ်နာ အစိမ်းသေလို့မကျွတ်တဲ့ဘဝမှာ သူမသေဆုံးခင် ကျိန်ဆိုခဲ့တဲ့ ကျောက်စရာ ကျိန်စာက “ဒီနေရာကို အတွဲတွေလာရင် ကွဲပါစေတဲ့. . . 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️
⛰ ⛰ ⛰အဲဒီတောင်ကို အရင်က မိန်းမဝဲ တောင်လို့ ခေါ်ဆိုနေရာကနေ ကာလရွေ့လျားလာတော့ မိန်းမရဲတောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ် ထင်ရှားလာခဲ့တာလေ 🌷 🌷 🌷
👆 👆 👆ထူးဆန်းတာ တစ်ခုကရှိပါသေးတယ်… ယောက်ကော် ဘရသေ့ကြီးပေါ့…သူ့ကို အိပ်မက်ပေးတဲ့ နန်းဧကရီမွှေး ဆိုတဲ့ ရှမ်းမင်းသမီးလေးက မိန်းမရဲတောင် ဆိုတာကို မြန်မာပြည် တစ်လွှားမှာရှာပြီး သာသနာပြုပေးပါလို့ အိမ်မက်ထဲမှာ လာပြီး ပြောရှာပါသည်တဲ့။
ယောက်ကော် ဘရသေ့ကြီးလည်း အိပ်မက်အရ မိန်းမရဲတောင်တော်ကို လိုက်လံရှာဖွေရင်း တောင်တော်ရဲ့အရှေ့ဘက် ရွာငံ အောင်ပန်းကား
လမ်းမကြီးပေါ်မှာ သူစီးလာတဲ့ကားက သူ့အလိုလို စက်ရပ်လို့ ကားပျက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်… 😨 😨 😨 👨‍🔧 👨‍🔧 👨‍🔧ကားဆရာက
အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီးပြုပြင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ ပြုပြင်လို့မရ စက်ပြန်နိူးလို့ မရတော့ပါဘူးတဲ့… အဲဒီလိုနဲ့ ညနေ နေညိုစောင်းလာတော့ကားလမ်းဘေးချုံတော
တန်းထဲမှ အစိမ်းရောင်ဝတ် ရှမ်းမလေး တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့…အစိမ်းရောင်ဝတ် ရှမ်းမလေးက ဘရသေ့ရှာနေတဲ့ မိန်းမရဲတောင်ဆိုတာ ဟောဟိုက အခုမြင်နေရတဲ့ မြင့်မားတဲ့ တောင်ပါပဲ လက်ညိုးထိုးညွှန်ပြ ပြောဆိုပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ စကားပြောပြီး ချုံတောတန်း
ထဲပြန်ဝင် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်တဲ့ (ကောက်နုတ်ချက်)…ဪ…မေ့ပြီးလည်း စုံတွဲ မသွားကြနဲ့အုန်းနော့ 👋 👋 👋
#တောကျယ် ရေတံ ခွန် 💦💦
ရေပြာအိုင် နဲ့ ကပ်လျက်ပဲ။ တော်တော်လေးကို လှပါတယ်။ ကိုယ်ဆိုဓါတ်ပုံရိုက်တာ ပန်းချီကားလားဘာလား ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတဲ့အထိကိုလှတာပါ
# မြသပိတ်ရေ ပြာအိုင် 💦
ရေ ပြာ အိုင် ကို မြင် လိုက်ရတာလူကို wow လို့ အော်မိစေတာပါပဲ။ ရေ ကတကယ် ကို ပြာ လဲ့ နေတာ။ အထဲ မှာလဲ ငါးလေး တွေရှိတယ်ပြောပါ
တယ်။ အောက် ဆုံး ထိ မြင်ရတယ် ရေက အရမ်း ကြည်နေတာလေ။ တချို့ပြောတာကြားဖူးတယ်ရေကပြာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့…ရေပြာအိုင်
ရဲ့ကန်မြေကိုကအပြာရောင်ဖြစ်စေတဲ့ဒြပ်တစ်ခုခုရှိနေတာတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ မွန်လေးတို့နိုင်ငံက ထူးဆန်းဖု့ိကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိနေ
#ကလောဘူတာ 🚊 🚊
ဒီဘူတာလေးဟာ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာလောက်ရှိပါပြီ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ကတည်းက ဘူတာလေးပါ။ အချို့နေရာတွေဆိုု ဟိုုအရင်ခေတ်က
အတိုုင်းရှိနေပါသေးတယ်။ အထင်ကရနေရာလေးမိုု့ ဒီနေရာလေးကိုု တော်တော်များများဓာတ်ပုုံလာရိုုက်လေ့ရှိကြတယ်။ ကလောဘူတာ 📸 ကဓါတ်ဖမ်းလို့ကောင်းသလို လက်မှတ်လေးဝယ်ပြီးအောင်ပန်းထိ ရထားစီးလို့ရပါတယ်။
နှီးဘုုရားဆိုုတာ ရှမ်းလူမျိုးတွေသာ ယက်လုပ်တတ်ကြပြီး ပြုလုုပ်ဖိုု့အတွက် ပါဝင်သူ အယောက်တိုုင်းဟာ သတ်သတ်လွတ်စားရတယ်လို့
သိရပါတယ်။ ကလောက နှီးဘုုရားကြီးကတော့ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်နေပြီမိုု့လိုု့ ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်သင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုုပါ။ အမြဲတမ်းလည်း
အလှူလုပ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့စည်ကားနေတတ်ပါတယ်။ မွန်လေးတို့သွားတုန်းကဆို လက်ဖက်သုပ်တွေအလှူလုပ်နေတာတွေ့ခဲ့လို့ ဝင်စားပြီးအလှူ
ကလောဈေးမှာဝယ်လို့အကောင်းဆုံးကတော့ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးတွေနဲ့ ဆီတို့ဖူးပါပဲ။
# နှစ်တစ်ရာသက်တမ်းရှိ ဘုုရားကျောင်း ⛪
သူကတောင်ပေါ်မှာရှိတာပါ။ ဝင်ဝင်ချင်းပန်းခင်းလေးရှိတယ်။ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှတယ်။ ဆွဇ်ဇာလန်ရောက်နေသလိုုပဲ။ ဘေးဘက်မှာလည်း
#နှစ်တစ်ရာရှိပြီဖြစ်တဲ့အိမ် (ဝါ) သရဲခြောက်သောအိမ်
ဒီအိမ်ကြီးကတော့ သရဲခြောက်တယ်လို့တော့ကားသမားကတော့ပြောတာပဲ။ အပြင်ကနေလာနေတဲ့သူတွေတော့ရှိတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
#View Point 🎑🎑
သူက Hill Top Vill Hotel ရှေ ့မှာရှိတဲ့ နေရာလေးကိုပြောတာပါ။ ညနေဘက် ကလောရဲ့ နေဝင်ချိန်ကိုု ရှုစားလိုု့ရတဲ့နေရာလေ။ ကော်ဖီလေးနဲ့ဆို အရမ်းမိုက်တယ်။
နောက်တစ်နေရာရှိပါသေးတယ်။ သူကတော့ သိမ်တောင်ပါ။ သူကလဲ ကလောရဲ့ ညနေ ဆည်းဆာအလှကိုု ကြည့်လိုု့ရမယ့်နောက်တစ်နေရာပါ။
#Trekking 🚶🏻 🚶🏻
သူကတော့တောတွင်းလမ်းလျှောက်တာမျိုးပါ။ ကလောကနေ အင်းလေးထိ လမ်းလျှောက်လို့ရသလို နေ့ချင်းပြန်လည်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။ ဂိုက်
တော့ငှားဖို့လိုပါတယ်။ လုုပ်နိုုင်ရင် ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ကလော အနီး အနား ပလောင် တောင် ဘက်ကို trekkingလုပ်တာအရမ်းလှတယ်ပြော
ရှမ်းပြည်နယ်က ထူးထူးခြားခြားကျောက်ထုလွှာဂူကြီးထဲမှာတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ ကလောရွှေဥမင်ဘုရားဟာ ရှားပါးတဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဖူးတွေ့ရ
မယ့်စေတီတွေရှိတဲ့နေရာပါ။ အထဲဂူထဲဝင်လိုက်တာ..အေးသွားတာပဲ။ ပုဂံမြို့အထိပေါက်ရောက်တယ်လို့ကြားဖူးတဲ့ ဒီလှိုင်ဂူကြီးကကျောက်စက်
တစ်ပြိုင်နက်ဖူးတွေ့နိုင်သော လှိုင်ဂူတော် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
#Motorbike Off-Road Tour(ride behind kalaw) 🏍🏍🏍
ဒီတိုးကတော့ တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကလောကိုလျှောက်သွားရတာမျိုးပါ။ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး Adventure ခံစားချင်ရင်တော့
ဒီတိုးလေးးကိုလက်မလွှတ်သင့်ဘူးနော်။ ဒီခရီးစဉ်သွားမယ်ဆို အကျႌအဖြူ ဘောင်းဘီအဖြူ လုံးဝမဝတ်သင့်ပါဘူး ❌❌လမ်းမှာ ဖုန်လမ်းလည်း ဖြတ်ရလို့ပါ ❗
#ကိုလိုနီခေတ်ကအိမ် 🏰 🏰
လှပြီးထည်ဝါတဲ့ကိုုလိုုနီခေတ်ကအိမ်တွေကလောမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း 102နှစ် ကျော် လောက် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိမ် တွေ ကိုလည်း တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ရှေးကျပြီး တန်ဖိုးရှိနေသေးတဲ့အိမ်တွေပေါ့။
#စားမယ် ဝါးမယ် 🍝♨🍛
မြန်မာ ထမင်း ဟင်းဆိုု သုုမောင်မှာစားပါ။ စိမ့်ဟိုတယ်တို့နဲ့ဆို မျက်စောင်းထိုးလေးပဲ။ လူအရမ်းများတယ်။ စားလို့ကောင်းတာကိုး။ 3500ကျပ်
အဝစားပါ။နောက်7Sisters ဆိုုတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုုင်တစ်ဆိုုင်လဲ ရှိပါသေးတယ်။ (ကြိုတော့ဖုန်းဆက်မှာတာကောင်းတယ် မှာမှချက်တော့ကြာတယ် ငါး လယ်သမားချက်လေးကြိုက်တယ်)။ ကော်ဖီသောက်မယ်ဆိုုရင်တော့ Café Kalaw မှာသောက်ကြည့်ပါ။ ရှုခင်း
လည်းလှတယ်။ဓါတ်ဖမ်းလို့လည်းသိပ်ကောင်း။ ကလော ရောက်ရင်တော့ရှမ်းစာတွေအဝစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရှမ်းတို့ဟူးကတော့မစားမနေ
မို့စားခဲ့ပါတယ်။ သီရိဂေဟာစားသောက်ဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်။ ဘားသွားချင်တဲ့လူတွေအတွက် Red House Bar & Restaurant လေးလည်းဖွင့်
ကလောကနေ အင်းလေးပဲ ဆင်းဆင်း၊ တောင်ကြီးပဲတက်တက်၊ နောင်ချိုပဲသွားသွား သွားလိုု့ရသေးတယ်နော်။ Public Transport တွေရှိတယ်။ Town Ace ကားတွေနဲ့ပါ။ တစ်နေရာကိုုသွားမှ ၂၀၀ဝ ကျပ်ပဲပေးရတာမိုု့ ကားငှားသွားစရာလဲမလိုုပါဘူးလိုု့။ နောင်ချိုကတော့ ၂၀၀ဝ မရဘူးနော်။ ၁၇၀၀ဝ လောက်ကုုန်တယ်။ သူက ရွှေညောင်အထိကားစီးပြီးမှ ပြန်စီးရတယ်ပြောပါတယ်။
တောတောင် ရေမြေသဘာဝ ကို ထိန်း သိမ်း တဲ့ အနေဖြင့် အမှိုက် မပြစ်ကြပါနှင့်
သ ျှားကို ဧဲသီမြို့လေးမှာ ဖဲ့ချဉ်သာ မွ မွ
ဦးကြောင်ကြီးကိိုလည်း မင်းရှိတဲ့မြို ့ကိုပြန်ဖဲ့ချင်တယ် ဟိဟိ
အမှတ်မမှားရင်.. အင်္ဂလိပ်တွေ..မြန်မာပြည်လာအုပ်ချုပ်တုံးက.. ကလောကို.. နွေရာသီစံမြန်းမြို့အဖြစ်ရွေးခဲ့သေးတာပဲ.။
ဒါပေမယ့်.. ဗိုလ်မှုးကြီးမေရဲ့ မြို့က… လမ်းပန်းအချက်အချာနေရာမို့.. ရှေ့ရောက်သွားပုံရတယ်..။